भाेगकाे कभरमा अाएकाे सुहाना खानको फोटोले पायाे तालीभन्दा बढी गाली «
भाेगकाे कभरमा अाएकाे सुहाना खानको फोटोले पायाे तालीभन्दा बढी गाली
Published :4August, 2018 9:17 pm
भोग इन्डियाले यो पटक आफ्नो कभरमा बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानकी १८ वर्षीया छोरी सुहाना खानको फोटो छापेको छ । तर यसपटकको भोगको कभरको प्रशंसा भन्दा पनि आलोचना बढी हुन थालेको छ । भोग म्यागेजिनमा कभर गर्ल बन्ने सुहाना खानको हैसियत नै नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै नै आलोचना भएको छ ।
प्रतिष्ठित म्यागेजिन भोगको कभरमा सामान्यतया टप मोडल, अभिनेत्री, तथा गायिकालाई स्थान दिइन्छ । तर सुहाना खानले आफैलाई ‘विद्यार्थी, सिनेमा मन पराउने तथा भविष्यको स्टार’ का रुपमा चिनाउँछिन् ।
उनका बुवा शाहरुख बलिउडका किङ भनेर चिनिन्छन् र धेरैले बुवाकै कारण सुहानालाई भोगको कभर गर्ल बनाएको बन्दै परिवारवाद हावी भएको आरोप लगाएका छन् ।
सुहानाको फेशन सुटको डिजाइन भोगकी फेशन डिजाइनर तथा शाहरुखकी साथी अनाइता श्रफ अदाजानिआले गरेकी हुन् । सुहानाको यो नै पहिलो फोटो शूट तथा अन्तर्वार्ता हो ।
यसबारेमा आपत्ति जनाउनेहरुमा धेरै संघर्ष गरिरहेका अभिनेत्रीहरु छन् ।
श्रुति टण्डन ट्वीटमा लेख्छिन्, ‘अस्तित्वमा नहुनुपर्ने केही कुराहरुमध्ये नातावाद एक हो । थुप्रै कलाकारहरु हुँदाहुँदै सेलिब्रिटीको सन्तान भोगको कभरमा । एउटै चलचित्र नखेली बाबु स्टार भएको आधारमा भोगको कभरमा हुनु स्वीकार्य छैन ।’
One of the few things that should not but exists…..#nepotism there are so many actors out there but celebrity kids are on the Vogue cover without evenasingle movie release just coz your father isastar – not acceptable???? #Nepostism #Suhanakhan #vogue pic.twitter.com/40TQsgBKLV
One of the few things that should not but exists…..#nepotism there are so many actors out there but celebrity kids are on the Vogue cover without evenasingle movie release just coz your father isastar – not acceptable #Nepostism #Suhanakhan #vogue
3:17 PM – Aug 2, 2018
सृष्टि लेख्छिन्, ‘सेलिब्रिटीको आलोचनामा खासैविश्वास छैन, तर सुहाना खान किन भोगको कभरमा?यो त सेलिब्रिटीको आलोचना पनि होइन किनकि उनका पिता सेलिब्रिटी हुन्, उनी होइनन् । मेरा पिता लेखापाल हुनुहुन्छ, के आईसीएआईले उसको कभरमा मेरो फोटो छाप्छ?’
12:52 AM – Aug 1, 2018
स्ट्याण्डअप कमेडियन अपूर्व गुप्ता ठट्यौली पारामा लेख्छन्,‘सुहाना खान हुनुको संघर्ष –
१. समुद्रतिर फर्केको बंगलामा बस्ने भएकाले समुद्रतटको बिदा मनउने कार्यक्रम उनका लागि रमाइलो विषय होइन
२‍. अति धनाढ्य भएकाले कुन रोलेक्स घडी लगाउने भन्ने निर्णय गर्न गाह्रो छ
३. १८ वर्षको हुँदा पनि करण जोहरले फिल्ममा लञ्च गर्दैनन् ’
3. Not getting launched by Karan Johar even though you are 18
2:43 PM – Aug 1, 2018